Plaque Inc.: Mushonga Unobatsira WHO Kukuchengetedza Iwe | Linux Vakapindwa muropa
Dambudziko Inc. yakanga yatove mutambo wevhidhiyo wakakurumbira uye wakabudirira. Yaive ine yekuvandudza hutachiona uye nekuona kuti inopararira sei mukati mevanhu. Algorithm yayo yaive chaiyo, saka vazhinji vakafunga kuti yaive kiyi yekuziva kuti SARS-CoV-2 yaizopararira sei pasi rese. Muchokwadi, pakange paine kubvunzana kwakawanda kune vanogadzira pamusoro penyaya iyi.
Munguva yedenda, ivo vaizofunga kutanga Denda Inc.: Mushonga, kuwedzera kutsva kwemutambo wepakutanga wevhidhiyo uye kwakachinja chinangwa. Mune ino kesi, basa remutambi raive chaizvo rakapesana, kutora danho kuyedza kununura nyika kubva kudenda. Zvakare kwaive kumwe kubudirira, kunyangwe kutora mukana wekufarira kwakamutswa neazvino mamiriro ehutano.
Huye, nhau izvozvi ndedzekuti Dambudziko Inc.. Iyo Mushonga (vanogadzira ayo), vari kushanda pamwe neWHO (World Health Organization) kuita kuti vashandisi vemutambo uyu vachengeteke uye vadzivirirwe kubva kuCovid-19. Saka, kana iwe uchida kujoina mutambo wevhidhiyo izvozvi, iwe unotoziva kuti inowanikwa yeGNU / Linux pane chiutsi.
Kana iri yekuponesa vanhu uye kuponesa hupenyu nekudzivirira kutambura, zvinoita senzira yakanaka yekushandisa mutambo wevhidhiyo. Ini ndinoshuva dai paine mamwe mapurojekiti aiita zvinhu zvakadaro (hutano, dzidzo, kuziva kwenyaya dzinopisa, nezvimwewo), kutora mukana wekudhonza iyo mitambo yemavhidhiyo ine, kunyanya pakati pevechidiki huwandu. Ivo kupunyuka zvine utsinye, uye zvinonyadzisa kuti vamwe vanongo tariswa sevaraidzo yakachena.
Nyanzvi kubva kuWHO uye Dambudziko Inc.: Mushonga uchabatana, sezvakaziviswa ne mugadziri Ndemic Creations. Chiri shure kwechibvumirano ichi ndechekuti WHO irikushandisa mutambo wevhidhiyo kuchengetedza vatambi kuchengeteka, kuvaita kuti vazive ruzivo rwenhema, uye kuvimbisa kubaya nhomba panguva yedenda. Unogona kuona zvese izvi muvhidhiyo yakaburitswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Denda Inc.: Mushonga Unobatsira WHO Kuchengeta Vashandisi Vakachengeteka